Ny kalitaon'ny lohany, ny mpamokatra lohan'ny fikosoham-bolo zoro havanana, vitaina any Chine - Dongguan Tuoyuan Precision Machines Co. LTD.
Home > Products > Fitaovana fitaovana milina > Loha fikosoham-bary > Head famotoana zoro ankavanana
Lisitry ny lohan-doha familiana zoro havanana
1). 0-500kg: laharam-pahamehana amin'ny entana
2). > 500kg: laharam-pahamehana amin'ny entana an-dranomasina
3). Araka ny fitakian'ny mpanjifa
2). Taratasy fonosana polybag / tissue / kitapo bubble / EPE foam / + Carton / fonosana hazo
3). Araka ny fitakian'ny mpanjifa amin'ny toe-javatra tsara
Fe-potoana:10 ~ 15 andro, arakaraka ny habetsahan'ny mpanjifa sy ny takiana
A5: Eny, manana izahay, fa tsy be loatra amin'ny tahiry.
A7: Miala tsiny fa sarotra ny maka entana amin'ny vola. Matahotra aho fa tsy afaka manaiky ny fandoavam-bola L / C isika mandritra ny fotoana manokana toy izany.
F9: Ahoana ny haben'ny kitapo hazo sy ny lanjan'ilay fonosana?
A9: boaty hazo roa tanteraka: iray ho an'ny milina fanenomana sarontava miaraka amin'ny 2100 * 860 * 1760mm (L * W * H) sy ny lanjan-tsambony manodidina ny 700 KG; ny iray hafa ho an'ny milina fantsom-bozaka miaraka amin'ny 1450 * 1000 * 1650mm (L * W * H) sy ny lanja aroud 400 KG; iray manontolo tsipika milina fiarovan-tava fiaramanidina mandeha ho azy dia fonosana 1100KG misy boaty hazo 2.
Hot Tags: Ny lohan'ny fikosoham-bolo, ny kalitao, ny fandrosoana, ny mpamokatra vita amin'ny sinoa, CE